Indhuhu waxay leeyihiin hubi higgaad ah | Martech Zone
Talaado, Nofeembar 11, 2008 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Toddobaadkan ayaan dhammeeyey akhriska Xaqiijinta Afka Hooyo: Laga soo bilaabo Olde Ingiriisi ilaa Email, Sheekada Tangoo ee Higaadda Ingiriisiga by David Wolman.
Waxaa laga yaabaa inaadan aqoon waxa loo yaqaan 'orthography' iyo 'etymology' waana caadi. Waan ogahay inaan ahay kawaanleyda naxwaha iyo higgaadinta, laakiin buugaan wuxuu iga dhigay inaan xoogaa ka yara fiicnaado xirfadahayga. Waxaa jira malaayiin erey oo ku qoran luqadda Ingiriisiga, laakiin celceliska qalin-jabiyaha dugsiga sare wuxuu ogyahay qiyaastii 60,000. Xaqiiqdu waxay tahay in inteena badani aanaan hayn tilmaan waxa ereyada ugu badani ku yihiin afkeenna!
Kuweenu waa luqad aan cod ahaan khaldanayn oo ah luqad aan macquul ahayn oo lagu barto. Dadka qaarkiis waxay aaminsan yihiin in higgaadinta khaladku ay astaan ​​u tahay jahliga, laakiin Shakespeare qudhiisu wuxuu u alifsan jiray uguna khaldami jiray ereyada sida uu u arko inay ku habboon tahay. Wuxuu dareemay waraaqaha iyo ereyaduba inay u egyihiin dhoobada farshaxan-sameeyaha. Bal ka fikir haddii aan ereyadayda dib-u-soo-celinta ah ku sameeyo boggan, dadku way i xaqirayaan (ka hor intaanan bixin).
Markaan u guureyno kun-sano cusub, waxaan isku aragnaa inaan ku hadalno ereyo ixtiraam u leh tikniyoolajiyadda oo aan waligood isku arki doonin qaamuus rasmi ah… iyo xitaa kuwa daabaca qaamuusku kuma heshiin karaan waxa sameeya iyo wixii aan sameyn.
Haddii aadan rumaysanaynin inaan soo saareyno ereyo cusub markaan sii socono, waxaad si fudud ugu baahan tahay inaad dib u milicsato waqtiga OK…. mise waa taas Okay… Ama waa taas oll korre or ole kurreck. Kaliya ka fikir, carruurta aad awoowaha u tahay waxaa laga yaabaa inay leeyihiin qayb ka mid ah wada sheekaysigooda maalinlaha ah, rofl, lmao, asap, lol, ttfn.
Ha rumaysanina? Ka waran ereyga Qulqulka, oo ahaan jiray erey-gaabin loogu talagalay Qalabka Neefta Neefsashada ee Biyaha Hoostiisa ku jirta. Sidee ku saabsan blog, taas oo wax ka yar toban sano ka hor ahayd Diiwaanka Webka! Ereyga waxaa ku yimid blogger, blogged, blogging iyo blogware. Waa wakhti aad u xiiso badan sidoo kale maxaa yeelay ereyo badan, soo gaabin ama lambarro gaagaaban oo laga soo saaray internetka maanta ayaa loo adeegsadaa si caalami ah.
Sidoo kale, waa wax xiiso leh sida xayeysiinta iyo suuqgeyntu ugu baahneyn inay raacaan qawaaniinta qoraalka. Waxaan haynaa shirkado sida Google, waxyaabo ay ka mid yihiin iPhone-ka iyo alaabooyinka sida Seesmic oo dhammaantood si buuxda loo aqbali karo - laakiin waxaan aad ugu yarnahay dulqaad la'aanta khaladaadka shilalka ee ku jira maaddadeenna. Waxaan u maleynayaa inay tahay wax xiiso leh.
Waad ku mahadsan tahay wanaag wali waxaan ku tiirsanaan karnaa higgaadinta!
Ishu waxay leedahay hubiyaha higgaadda,
Waxay la timid Baddii Digirteyda.
Waxay diyaarad lee tahay afar calaamadayda
Miss Steaks Waan xiri karaa badda.
Indhuhu waxay ku dhuftaan maraakiibta oo qor eray
Miisaanka afraadna laba ayaa dhaha
Weather eye am qor oar qaldan
Miisaan buu toos iigu sheegayaa.
Waxaan kugu dhiiri galin lahaa inaad soo qaadato nuqul ka mid ah buugga, waa socod xiiso badan oo taariikhda la marayo. Daa’uud akhriska aad buu ufududeeyey. Xitaa madadaalo dheeraad ah ayaa ah inuu ka sheekeeyo dhammaan asalka Ingiriiska maxaa yeelay, isagu, isagu, wuxuu booqdaa meelihii laga beddelay. Waa a aqris weyn!
Tags: isugeynta tirakoobkacelceliskaHubinta Noocaastaanta macaamiishamacdanta keydkamugga keywordmacdantaSuuqgeynta Mobilada iyo Mashiinkadukaamaysiga internetkadadka
Immisa erey ayaa boostada ku saxan?
Nov 12, 2008 at 11: 01 AM
Bill Bryson's si lamid ah loo magacaabay iyo buug hore waa buug kale oo weyn, haddii aanad dhib ka qabin Bryson qaabka hagar la’aanta ah ee tuurista-xaqiiqooyinka-ah-adiga ”. Anigu ma aqrin buuga Wolman, marka ma garanayo inta isku laaban ee laga yaabo inay jiraan.
Nov 12, 2008 saacadu markay tahay 1:14 PM
Dan, waa inaan hubiyaa taas. Mid ka mid ah buugaagta aan ugu jeclahay sanadkii hore wuxuu ahaa Taariikh Gaaban oo ku dhow abid oo uu qoray Bill Bryson!
Nov 15, 2008 saacadu markay tahay 4:53 PM
Haa, Taariikhda Gaaban waxay si sax ah u ahayd sababta aan u soo qaatay Afka Hooyo markii ay igu dhacday inaan ku ordo guud ahaan.